Cabdisamad Galan iyo ciidamo uu wato oo soo garey Tuulada Kalabayr gobolka Bari - Galmada.net
Cabdisamad Galan iyo ciidamo uu wato oo soo garey Tuulada Kalabayr gobolka Bari
June 21, 2016 June 11, 2017 admin
Habeenimadii xalay waxaa soo degey tuulada Kalabayr ciidamo badan oo uu wato Guddoomiyihii hore ee Gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan. Tuulada Kalabayr ayaa xarunta gobolka Bari ee Bosaso u jirta 45km oo keliya waxaana ay ku taala waddada laamiga ah.
Ciidamada uu wato Cabdisamad Gallan ayaa ku hubeysan gawaari badan oo gaashaaman, waaraado, wiish iyo hal gaari oo nooca anblasta ah ee gargaarka deg-dega ah. Ciidamadan ayaa tuulada Kalabayr ka degey dhanka Koonfureed ee Buurta maadaama dhanka Waqooyi ay ka joogaan ciidamo kale oo Puntland ah.
Warar goor danbe Horseed soo gaarey ayaa sheegaya in Ciidamada Gallan watey markii ay ka warheleen dhaq-dhaqaaqa ciidanka Puntland ay dib ugu noqdeen meel ku dhaw degmada Carmo oo ku taala laamiga una jirta Bosaso fogaan dhan 100km.
Sababta Imaashaha Gallan
Maalmihii u danbeeyey waxaa socdey waan-waan lagu wada hadal siinayo maamulka Puntland iyo Cabdisamad Gallan oo muddo bilo ah ciidamo ku urursanaayey dhulka beeshiisu degto ee Bariga fog isla markaana ku dhawaaqey in uu Puntland dagaal la gelaayo isla markaana samaynaayo wax uu ugu yeeray “Puntlandta Cusub”. Wada hadalka waxa ka qayb-qaatey Beeldaaje Jaamac Beeldaaje Xaaji Cabdullaahi, waxaana warar Horseed Media heshey sheegayaan in lagu heshiiyey in Cabdisamad soo galo Bosaso isaga oo aan wax ciidan ah wadan.
Maamulka Puntland ayaa sheegay in Cabdisamad Gallan oo wata ciidamo badan iyo Tikniko in uu soo dego Kalabayr ay tahay ku dhawaaqid dagaal, isla markaana ay khilafsan tahay sida wada hadalku ahaa waxaana hadda laga dareemayaa dhamaan xeryaha ciidamada ee Puntland abaabul, sida Horseed media ka ogaatey ilo ku dhaw ciidanka Puntland. Sidoo kale warar Horseed Media heshey ayaa sheegaya in malayshiyaadka al-Shabaab ee buurta Galgala iyo weliba kuwa Daacish ay wadaan dhaq-dhaqaaq ay ku soo gaarayaan laamiga, lama oga waxa labadan arrimood isku soo aadiyey xiligan.
Wixii war ah ee ku soo kordha gadaal ayaa laga daabici.
Xogta burburka somaalida dalka iyo dibadda